DAAWO VIDEO: Saciid Deni oo ku dhawaaqay qorshe uu Wajihi doono deegaanada Somaliland ay ka qabsatay Puntland | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Saciid Deni oo ku dhawaaqay qorshe uu Wajihi doono deegaanada...
DAAWO VIDEO: Saciid Deni oo ku dhawaaqay qorshe uu Wajihi doono deegaanada Somaliland ay ka qabsatay Puntland
Garoowe (Halqaran.com) – Madaxweynaha maamulka Puntland, Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Sabtidii maanta sheegay in Somaliland uu wada hadal kala galayo dhulka ay muransanyihiin.
Mr. Deni ayaa waxa uu ku noqnoqay madaxwaynihii ugu horeeyey Puntland oo si cad u sheega in Puntland wada hadal ka galayso Sool iyo Sanaag oo Wakhti badan ay isku hayeen Somaliland, islamarkaana dagaallo ku dhexmareen labada dhinac.
“Farriinta ugu horraysa waxaan u dirayaa Somaliland, shaatigaaga waa lagugu qabsan karaa, dhulka Puntland ee ay ku soo xadgudubtay , wadahadal iyo nabad inaan ku dhammayno oo ku garnaqsadaan baan ugu baaqaynaa” ayuu yiri Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland.
Madaxweynaha Puntland, ayaa hadalkan ka sheegay bandhigga buugga diiwaanka Nabadda Soomaaliyeed (Hore, Hadda iyo Hadhow ) oo ay qortay aqoonyahanad Deeqa Jaamac Col u joog, waxa ay qoraysey buuggaasi muddo ku siman 35 sano, waxaana lagu soo bandhigay xarunta Hay’adda Cilmi Baarista ‘PDRC’ ee Garoowe.
Puntland oo ku dhawaaqay qorshe